Lioka 19 - Ny Baiboly
Lioka toko 19
Jesoa tao amin'i Zake - Ny fanoharana ny amin'ny mina folo - Ny niakaran'i Jesoa tany Jerosalema - Ny nitomaniany an'i Jerosalema - Ny nandroahany ny mpivarotra tao an-tempoly.
1Nony niditra tao Jerikao Jesoa, dia namaky ny tanàna. 2Ary indro nisy lehilahy anankiray atao hoe Zake, lehiben'ny poblikàna sady mpanan-karena, 3nitady hahita an'i Jesoa mba hahalala azy, fa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona satria fohy izy. 4Koa nihazakazaka nialoha izy, dia nianika amontana anankiray hitazana azy, fa eo no handalovany. 5Nony mby teo Jesoa dia niandrandra ka nahita azy, ary nanao taminy hoe: Ry Zake, midìna haingana, fa tsy maintsy hiantrano ao aminao aho anio. 6Dia nidina haingana izy ka nandray azy tamin-kafaliana.
7Ary nony nahita izany ny olona, dia nimonomonona nanao hoe: Lasa niditra any an-tranon'ny mpanota izy. 8Fa Zake kosa nijoro nanao tamin'ny Tompo hoe: Tompoko, indro ny antsasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tsy an-drariny dia honerako inefatra hoatra azy. 9Dia hoy Jesoa taminy: Tonga amin'ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak'i Abrahama koa ity lehilahy ity, 10fa ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan'ny Zanak'olona.
11Raha mbola nihaino izany ny olona dia nanao ity fanoharana ity koa Jesoa, fa efa akaikin'i Jerosalema izy, ary nataon'ny olona fa ny fanjakan'Andriamanitra hiseho miaraka amin'izay, 12ka hoy izy: Nisy andriandahy anankiray nankany an-tany lavitra mba handray fanjakana, dia mbola hiverina. 13Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ka nanome azy mina folo ary nanao taminy hoe: Ampitomboy ireny mandra-piveriko. 14Fa nankahala azy kosa ny vahoaka iray tanin-drazana aminy ka nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe: Tsy tianay hanjaka aminay iny lehilahy iny. 15Nony nahazo fanjakana izy ka tafaverina, dia nampaka ny mpanompo nomeny vola mba hahitany izay tombony azony avy.
16Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe: Tompoko, nahazoana mina folo ny mina iray. 17Ary hoy izy taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara, noho hianao nahatoky tamin'ny kely, dia hanapaka tanàna folo hianao. 18Dia tonga koa ny faharoa ka nanao hoe: Tompoko, nahazoana mina dimy ny mina iray. 19Ary hoy izy taminy: Hanapaka tanàna dimy koa hianao. 20Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe: Tompoko, indro ny minanao, fa notahiriziko tao anaty lamba; 21satria natahotra anao aho, noho hianao lehilahy sarotiny ka maka izay tsy napetrakao, sy mijinja izay tsy nafafinao. 22Dia hoy ilay mpanjaka taminy: Azoko amin'ny vavanao hianao, ry mpanompo ratsy fanahy; fantatrao fa olona sarotiny aho ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko; 23koa nahoana àry no tsy napetrakao tany amin'ny banky ny volako mba handraisako azy mban-janany rahefa tafaverina aho? 24Dia izao no nataony tamin'izay teo: Alao ny minany eny aminy ka omeo ilay manana folo. 25Fa hoy ireo taminy: Tompoko, efa manana mina folo izy. 26Lazaiko aminareo fa izay manana no homena; fa izay tsy manana kosa dia halaina mbamin'izay ananany aza. 27Ary ireo fahavaloko tsy nety hanjakako ireo kosa dia ento atý, ka vonoy eto anatrehako.
28Rahefa niteny izany Jesoa, dia nandeha nialoha hiakatra any Jerosalema, 29ka nony mby akaikin'i Betfage sy Betania anilan'ny tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka ny mpianany roa lahy, 30nanao hoe: Mankanesa amin'itsy vohitra aloha itsy, fa rahefa miditra ao hianareo dia hahita zanak'ampondra mifatotra tsy mbola nitaingenan'olona, ka vahao izy, dia ento atý. 31Ary raha misy manontany anareo hoe: Nahoana io no vahanareo? valio hoe: Misy ilàn'ny Tompo azy. 32Dia lasa ireo iraka ka nahita ny zavatra araka ny voalazan'i Jesoa taminy. 33Teo am-pamahana ny zanak'ampondra dia hoy ny tompony tamin'izy ireo: Nahoana no vahanareo ity zanak'ampondra? 34Ka novaliany hoe: Misy ilàn'ny Tompo azy. 35Dia nentiny tany amin'i Jesoa ny zanak'ampondra, ka nataony teo amboniny ny fitafiany, dia natainginy teo Jesoa. 36Nony nandroso izy, dia novelaran'ny olona ny fitafiany ny làlana. 37Ary rahefa mby akaikin'ny fidinana amin'ny tendrombohitra Oliva izy, dia nientan-kafaliana ny mpianany maro be ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, noho ny fahagagana rehetra hitany. 38Hankalazaina anie, hoy izy ireo, ny Mpanjaka avy amin'ny anaran'ny Tompo! Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie amin'ny avo indrindra! 39Ary ny Farisiana sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, rarao re ny mpianatrao! 40Fa novaliany hoe: Lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia hiantsoantso ny vato.
41Ary nony mby akaiky izy ka nahita an'i Jerosalema dia nitomany azy nanao hoe: 42Raha izay kosa mantsy hianao no mba nahalala izay hampiadana anao, na dia amin'ity andro nomena anao ity ihany aza! Fa takona ny masonao izany ankehitriny. 43Ka ho avy aminao ny andro hanaovan'ny fahavalonao hady manodidina anao; hosaronany hianao sy hotereny hatraiza hatraiza, 44ary hofongorany hatramin'ny tany mbamin'ny zanakao eo anatinao ka tsy havelany hisy vato mifanongoa eo aminao, satria tsy nahalala ny andro namangiana anao hianao.
45Nony niditra tao an-tempoly izy, dia nandroaka ny mpivarotra sy ny mpividy tao, 46ka nanao taminy hoe: Efa voasoratra, fa ny tranoko dia trano fivavahana, nefa hianareo kosa nanao azy ho zohin'ny mpangalatra. 47Dia nampianatra isan'andro tao an-tempoly izy; fa ny lehiben'ny mpisorona sy mpanora-dalàna ary ny loholona kosa nitady hahafaty azy; 48nefa tsy hitan'izy ireo izay hevitra hoenti-manao izany, satria faly sy ravo nihaino azy ny vahoaka rehetra. >